အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်ရင်း အရှေ့ကို လျှောက်ပါလို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်ရင်း အရှေ့ကို လျှောက်ပါလို့
Posted by kai on Jan 6, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, My Dear Diary |5comments
..yesterday is butadream,
– from The Salutation to the Dawn based onaVedic Hymn. (By Aung San Suu Kyi)
Following her release from house arrest this past November, Myanmar’s pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has once again begun contributing her “Letter from Burma” column to the Mainichi, endinga13-year absence from its pages.
In her column, Suu Kyi intends to suggest how to press forward with Myanmar’s pro-democracy movement, which faces major challenges in the authoritarian state.
အဲဒီအပေါ်ကစာတွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မအိနိချိရှင်းဘွန်း ဂျပန်သတင်းစာမှာရေးတာ။
အဲဒါကို မိုးမခမှာ ဘာသာပြန်ပြီးတင်ထားတာတွေ့လို့ မြန်မာပြည်တွင်းကသူတွေဖတ်လို့ရအောင် တင်ပေးတာပါ။
(ဘာသာပြန်သူ – ဇာဝါရီ (မယ်ရီလန်း)
— အေဒီ ၆၀၀-၁၂၀၀ ရာစုအတွင်း ထင်ရှားခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယကဗျာစာဆိုကြီး ကာလီဒါစ (Kālidāsa [600 – 1200 AD) ရဲ့  အာရုဏ်ဦးကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်း
ပြည်တွင်းကလူတွေအတွက် အသိအမြင်ပိုလာစေလို့ တင်ပြပေးတာကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
အားလုံးစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ကျနော်တို့ အိမ်ကြီးကို အမေဦးဆောင်ပြီးအမြန်
ဆုံးပြင်နိုင်အောင် သားတို့ မျှော်လင့်စောင့်စားလျှက်ပါ အမေ၊၂၀၁၁ ကတော့
အမေနဲ့ အိမ်သားတွေအားလုံးအတွက် မင်္ဂလာရှိသောနှစ်ဖြစ်ပါစေလို့……….
ကျွန်တ်ာတို့ တတွေ ဆုတောင်းနေလို့၊မျှော်လင့်နေယုံ့နဲ့ မပြီးသေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့တတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်အောင်အတူတကွ လျှောက်လှမ်းကြပါစို့။ရှေ့သို့ချီတက်ကြပါစို့။
လူတွေက ဘာလိုချင်ညာလိုချင်သာဖြစ်တာ တစ်ကယ်တမ်းကြိုးစားအားထုတ်မှူပြုတဲ့အခါကြရင် ဦးဆောင်စလုပ်ဖို့မပြောနဲ့ နောက်ကနေတောင် မလိုက်ရဲကြဘူး ။
zaw min ပြောတာ ဟုတ်တယ် ဆုတောင်းနေယုံနဲ့ ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး ။ီညီညွတ်ညွတ်နဲ့လက်တွဲပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ရောက်အောင်အတူတကွ လျှောက်လှမ်းကြပါစို့။ရှေ့သို့ချီတက်ကြပါစို့။ ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာအောင်လုပ်ရမယ် ။